NewGene သည် COVID-19 antigen self-testing လိုင်စင်ကိုနိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံတွင်ထပ်မံရရှိခဲ့သည်။ ယခင်ကဥရောပ Professional Whitelist Grand Slam အနိုင်ရ!
Aprilပြီလအစောပိုင်းတွင်မီဒီယာအတော်များများက Hangzhou အခြေစိုက် COVID-19 detection reagents-NEWGENE (Hangzhou) ဇီဝအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ၏ NEWGENE အမှတ်တံဆိပ် COVID-19 antigen ကိုဥရောပရှိအဓိကနိုင်ငံများအားလုံး၏ပညာရှင်ဆန်ဆန်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ...
သတင်းကောင်း! ပြင်သစ်တွင် NEWGENE ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခွင့်ရ
21-05-15 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် NEWSMEN COVID-19 Antigen Detection Kit ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ANSM မှကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဂျာမနီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင်၊ ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အဓိကနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ t မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်သာ ...
NEWGENE သည် BfArM အားဂျာမနီတွင်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်
NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit သည်ဂျာမန်ဆေးများနှင့်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီ (BfArM) မှအိမ်သုံးအတွက်အရေးပေါ်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခြင်းအဖြစ်စာရင်းပြုထားသည် (GZ 5640-S-296/21) ။ တရားဝင်မှုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ် ၁၁ ရက်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိတွင်အားလုံးတွင်သက်တမ်းအရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။
COVID-19 Antigen Detection Kit သည်ဘယ်လ်ဂျီယံကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန (FAMHP) နှင့်ဆွီဒင်ဆေးထုတ်ကုန်အေဂျင်စီ (ဆွီဒင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်အေဂျင်စီ) တို့၏ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ NEWGENE သည် Denmar ပြီးလျှင်ဥရောပနိုင်ငံနှစ်ခုတွင်ပထမဆုံးစမ်းသပ်ချက်ကိုရရှိသောပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
တရုတ်ကုမ္မဏီ၏ COVID-19 antigen စမ်းသပ်မှုသည်ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီနှင့်ပေါ်တူဂီစသည့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံမှ Grand Slam အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် Mutant ဗိုင်းရပ်စ်များပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အခြားသောအချက်များကြောင့် COIVD-19 ကပ်ရောဂါသည်ဥရောပနိုင်ငံများစွာတွင်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ NEWGENE Novel Coronavirus Antigen ထုတ်ကုန်တီဗွီအထူးအစီရင်ခံစာ
21-04-08 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
NEWGENE ၀ တ္ထု Coronavirus Antigen ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပစ္စည်းသည်စပိန်ဒေသခံထုတ်လွှင့်သည့် Antena3 အထူးတီဗွီအစီအစဉ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ NEWGENE ထုတ်ကုန်များသည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်ပြည်တွင်း၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
COVID-19 / တုပ်ကွေး A / တုပ်ကွေး B ကိုထောက်လှမ်းရေးကိရိယာ
ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုမှုဤထုတ်ကုန်သည် Sputum / မစင်နမူနာများတွင် COVID-19 / Influenza A / Influenza B ၏အရည်အသွေးဖော်ထုတ်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်အထက်ပါဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အတူရောဂါကူးစက်မှုကိုစစ်ဆေးရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ အကျဉ်းချုပ်ဝတ္ထု coronaviruses ၏ ...
COVID-19 ပibိပစ္စည်း / Antigen Detection Kit
ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုမှုဤထုတ်ကုန်သည် COVID-19 ၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ ဒါဟာ coronavirus ဝတ္ထုနှင့်အတူရောဂါကူးစက်မှု၏ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်အကူအညီပေးသည်။ အနှစ်ချုပ်အဆိုပါဝတ္ထု coronaviruses β genus ပိုင်။ COVID-19 သည်ပြင်းထန်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်သည်။
COVID-19 Detection Technologies ၏နှိုင်းယှဉ်မှု
COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပြီးနောက် မှစ၍ လူများစွာသည်နူကလီယမ်အက်ဆစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ ပdetectionိပစ္စည်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် antigen ထောက်လှမ်းမှုအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောဖော်ထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုနားမလည်ကြပါ။ ဤဆောင်းပါးသည်ထိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနည်းလမ်းများကိုအဓိကနှိုင်းယှဉ်သည်။ Nucleic acid ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်
Yinye ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကွန်ယက်သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လွှမ်းခြုံထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏တာ ၀ န်မှာ "ဇီဝနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးပြီးလူသားတို့၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုသည်" ဖြစ်သည်။